गन्तब्य नेपाल न्युज :: बिचार / बिश्लेशण
बिशेष प्रकाशकीय : सरकार व्यावसायीको मुद्धालाई अबिलम्ब सम्बोधन गर
कोरोना भाईरसबाट प्रभावित पर्यटन व्यावसायी प्रति सरकारको गम्भीरता देखिएन
गाउँसहर अन्तर सम्बन्धको विकास, समृद्धिको नयाँ निकास
टान अध्यक्षका प्रत्यासी गणेश सिंखडाद्धारा नयाँ प्रश्ताब सार्वजनिक
पर्यटनको विकासमा गाईडको भूमिका
टानमा सर्बसहमतियको नजिक रहन सक्ने उमेद्धवार, उता यस्ता छन प्रतिष्पर्धी उमेद्धवार
नयॉ पर्यटन मन्त्रीका चुनौति र अवसर
यसरी संभब छ, टानको प्रगती :डिजीटल युगमा प्रवेश गराउँछु :मुक्ति पाण्डे
टानमा सर्बसहमतियको ठेकेदारी :चुनाब हुँदा अरु, सर्बसहमतियमा आफु !!
राजधानी काठमाडौंलाई अव अझ कति कुरुप बनाउने ?
देशको केन्द्रिय राजधानी काठमाडौंका सडकमा हिड्ने पैदलयात्री देखि सवारी चालक सबैलाई सोध्नुहोस्, सडकमा तपाईहरुले दैनिक भोग्ने गरेको प्रमुख समस्या के हो? सबैको साझा उत्तर हुनेछ–उच्च सवारी चाप, बढ्दो जाम र प्रदूषण । बिगत केहि बर्षदेखि स्थायी तथा अस्थायीरुपले काठमाडौंमा बसोबास गर्ने जनसंख्या तीब्र रुपले बढ्दै गएको छ । सोहि अनुरुपमा सवारीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यका भित्र खाली क्षेत्र भेट्न प्रायः मुश्किल छ । केहिबर्ष आगाडी उपत्यकाबाट नियाल्दा देखिने हरियो रमणीय दृष्य सुक्खा माटोमा परिणत हुदैछ,या भनौ कंक्रिटको सहर बन्दै छ काठमाडौं ।
देशको राजधानी चिटिक्क, प्रकृतिमैत्री, हराभरा नभएर पुरै अव्यवस्थित तबरले ढलानमैत्री हुदै । सरकारी स्तरबाटै शहरलाई सफा, चिटिक्क, प्रकृतिमैत्री, हराभरा, व्यवस्थितसडकको ढाचामा बदल्न बेलैमा ठोस कदम
“राज्य सन्यन्त्रको उदासिनताले पर्यटन क्षेत्रको जोखिम बढदो”
पर्यटन व्यवसायमा निम्न वर्गका यूवा पुस्तालाई पनि आउने अवसर दिनुपर्छ । यो पेशा व्यवसाय थोरै लगानीमा उक्तम अवसरको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यस व्यवसायमा कुनै प्रकारको चिनजान वा सोर्स फोर्सको आवाश्यकता पनि पर्दैन, मेहेनत, लगनशीलता र इमान्दारीता भएमा यस व्यवसायबाट प्रगती र उन्नती गर्न सकिन्छ ।
“पर्यटन वर्ष २०२०” बिना रणनिती सम्भव छ ?
सन. २०२० वर्षलाई पर्यटन वर्षको रुपमा भव्य तयारीका साथ आज सारा पर्यटन व्यवसायी जुटीसकेका छन् । यस अर्थमा अब हामी सँग धेरै अल्मलिने छुट पनि छैन, तर तयारीको पूर्व संन्ध्यामा पर्यटन व्यवसायमा कहि कतै सरोकार नराख्ने नामलाई भ्रमण वर्षको संयोजकको रुपमा अगाडी सारियो, यसो गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्बन्धित विज्ञहरुबाट भएको कमजोरी त छदै छ, त्यो भन्दा बाहेक नेकपा पाटी मातहतबाट मन्त्री बन्नुभएका माननिय पर्यटन मन्त्रि ज्यूलाई पनि कतै प्रभावमा पार्ने काम भएन भन्ने पनि भावना जनतामा वा पर्यटन व्यवसायीमा पर्न गएको छ । यसबाट अझ के बुझन सजिलो भयो भने, ठुला पद खानको लागि, ठुलै व्यवसायी भए पुग्ने रहेछ, त्यस्को ज्ञान हुनु आवस्यक रहेनछ, भन्ने सहजै अनुमान गर्न पर्यटन व्यवसायीलाई बाध्य पारीयो ।
उल्लासमय चाड तिहार: यमपञ्चकका पाँच दिन
नेपाल संसारकै एउटा विविधताले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं भाषिक रुपमा अनेकता रहेको छ ।
Homestay Management in Nepal Perspective and Challenges
Principally, homestay isaliving arrangement withahost family who offers an extra private guestroom or space foraguest againstanominal charge in comparison with other expensive types of temporary or long-termaccommodations.In this regard, tourism sector provokes that homestay could becomeaform of tourist accommodation allowinga visitor to rentaroom fromalocal family to experience the socio-culture, local lifestyle as well as hospitality of the host community.
E-Smart Heritage Tourism
In the 21st century as the technology is exponentially growing day by day with mobile being an essential need of our daily life to run every aspect including the day to day activities. In this context, we should not forget, Nepal has also been growing very fastin Information Technologies in every functions and activity. On the other hand, the concept of theSmart City is growing all over the world, where the human services are technically savvy, and smartly used.
नेपालको पर्यटन र ‘भिजन २०२०’
सन् १९५० तिर जापानी बौद्ध भिक्षु इकाई खावागुची र भारतीय सम्राट अशोकाले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेपालमा पर्यटनको सुरुवात भएको तथ्य हामीसँग छ ।
मिडिया माथिको नाङ्गो नाँच बन्द गर
गन्तव्य नेपालले आफ्नो झण्डै डेढ दशकको यात्रामा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा आयम थप्ने विविध गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । चाहे त्यो पर्यटन क्षेत्रको हरेक पक्षलाई उजागर गर्दै राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने कुरामा होस् या त व्यवसाय र व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नै किन नहोस् ।
पर्यटन क्षेत्रमा नजर नपुगेका छिद्रहरु
हाम्रो देशका ठूला व्यावसायी, नीति र्निमाता, सरकारी उच्चतहका व्यक्ति तथा अन्य पर्यटन क्षेत्रका अग्रजहरुलाई सानातीना र झिनामसिना कुरामा अल्झने फुर्शद पनि कहाँ छ र ! उहाँहरुको गगनचुम्बी इच्छा र प्रगतिको वागडोरलाई लगाम लगाउनेकाम यहाँ पंतिकारले गर्नआँटेको पनि होइन ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका आधार
पर्यटन विकास क्रमलाई हेर्दा यसलाई मानव सभ्यताको विकास भन्दा पुरानो मान्न सकिन्छ । मानवहरु इतिहासको सुरुमा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न घुमन्ते जीवन बिताउँथे । विस्तारै घुमन्ते र पाषण युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गर्दै क्रमशः मानव सभ्यताको विकासतर्फ अगाडि बढेको पाइन्छ । फेरि सभ्यताको विकाससँगै प्राचिन समयमा पाइथागोरस, प्लेटो, एरिष्टोटललगायतका विद्धानहरुले विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण गरेको पाइन्छ ।
उल्लासमय चाड बडा दशैं
हर‌े‌क वर्षझै‌ं ने‌पालीजनमा दसै‌ंको‌ लहर‌ छाएको‌ छ । मौ‌समी परि‌वर्तनसँगै‌ हर‌े‌क वर्ष आउने‌ दसै‌ं मनो‌र‌म प्राकृतिक एवं आनन्दप्रद क्षण हो‌ ।
नेपालीको हिमालसँग नजिकको नाता छ । धेरैका लागि यो गर्वको सम्बन्ध रहेको छ । सन् २००८ मा मेरा लागि सगरमाथा गर्वबाट अनुभवमा परिणत भयो । त्यहाँबाट खुलेको ढोकाबाट चियाउँदै जाँदा सन् २०१७ मा बल्ल नेपाली भूमिमै उभिएर संसारलाई नेपाल पस्किने मौका जु¥यो । हिमालयन ट्राभल मार्ट २०१७ को सन्दर्भमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगर्स तथा मिडिया कन्फरेन्स (आइटिबिएमसी) मार्फत ।
A Phenomenal contribution by Mr. Gil
A South Korea based highly profile gentlemen, with the name of Captain Um Hong Gil, had graciously proposed to buildahospital – Namche Clinic- at the Namche of Mt. Everest region for which the ground breaking ceremony was observed in the month of March 2016 .
ठमेलको विकासमा रमिता नगर
राजधानी काठमाण्डौ ओर्लने पर्यटकको पहिलो गन्तव्य ठमेल, रंगीन दुनियाँको संसारमा अब्बल । तर सरकारी नजर र ठमेलका स्थानिय व्यवसायी समेतले पर्यटकको खानपिन, आवासदेखि घुमफिर सम्मको पहिलो गन्तव्यका रुपमा ठमेललाई परिभाषित गर्ने गरेको पाईन्छ ।
शालिनदी र श्रीस्वस्थानी‌ महात्म्य
काठमाडौंबाट १७ किलो‌मिटर‌ उत्तर‌पूर्वमा र‌हे‌को‌ छ प्राचीन शहर‌ साँखु । धार्मिक र‌ ऐ‌तिहासिक महत्व बो‌के‌को‌ साँखुलाई चन्द्रज्यो‌ति नगर‌ अर्थात् शंखर‌ापुर‌ पनि भनिन्छ । भनिन्छ, साँखुमा शंखदे‌व नामक र‌ाजाले‌ शासन गर‌े‌का थिए । शंखदे‌व नै‌‌ साँखुमा प्रथम र‌ाजा थिए । उनको‌ नाममा साँखुको‌ नाम शंखर‌ापुर‌मा र‌हन गएको‌ हुनुपर्छ ।
स्कि पर्यटन र नेपाल
नेपाल हिमालै हिमालको देश हो । आठ हजार मिटर उचाईका १४ वटा ओटा हिमालहरुमध्ये ८ वटा हिमाल नेपालमा रहेका छन् । अन्य छ हजार मिटर उचाईभन्दा माथिका हिमालहरु हजारौको संख्यामा रहेका छन् । साहसिक पर्यटकिय दृष्ट्रिले नेपाल लोकप्रिय हुनुका कारणहरुमध्ये हिमाशृंखला पनि एक हो ।
ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिमा चाँगुनारायण
काठमाडौँ उपत्यकाको चार नारायाण चाँगु, इचंगु, शेष र विशंखुमध्ये एक चाँगुनारायाण हो । गोपालराज वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार इस्वीको १४ औँ शताब्दीमा चार नारयण स्थापना भएका हुन । काठमाडौँबाट करिब १६ किमी पूर्व भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित छ ।
उल्लासमय चाड तिहार
धार्मिक महत्व बोकेको दक्षिणकाली जाने बाटो
कार्तिक १२, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका चारै दिशामा अवस्थित धार्मिक स्थल वा पीठहरुको अवलोकन गर्ने सिलसिलाअन्तर्गत, ती क्षेत्रका आ–आफ्ना भौगोलिक विशेषता वा मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरुका झट्ट परिकल्पना गर्दा प्राथमिकताका साथ, स्वभावतः दक्षिणकाली भ्रमणको
परिषद्को बिबादले कता लैजादै छ ठमेललाई ?
ठमेल, सधै चर्चाको चरमचुलीमा रहने गरेको छ । चाहे त्यहाँ भित्रका विकास निर्माणको काम होस् या त अव्यवस्थाको कारण किन नहोस् । तर पछिल्लो समय अलि भिन्न तरिकाले ठमेलको चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ ।
पर्यटन व्याबसायको विकास कि राजनीति ?
नेपालको तीन खम्बे अर्थनीति अन्र्तगत कृषि, हाईड्रो र पर्यटन मानियको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै युवा युवतीहरु आकर्षित भएका छन् ।
सन्दर्भ : ठमेल परिषद् विवाद, फुटेर होइन जुटेर ठमेलको विकासमा लागौं : यसैमा सबैको भलो छ
ऐतिहासिक स्थल ललितपुरको बुङमति
ललितपुर‌को‌ चक्रपथबाट दक्षिणतिर‌ नख्खुखो‌ला तर‌े‌र‌ ८ कि.मि. अघि गएपछि बुङमति गाविस आइपुग्छ । बुङमति अंशुवर्माको‌ र‌ाज्यकाल सम्वत २९ दे‌खि व्यापक चर्चामा आएको‌ दे‌खिन्छ । बौ‌द्ध ने‌वार‌हरुको‌ बाहुल्य भएको‌ यस गाउँमा के‌ही क्षे‌त्रीहरु प्नि बस्दछन् ।
पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा मात्र सीमित रहेको पर्यटकीय गतिविधिलाई अब राजधानीमै नयाँ गन्तव्यको रुपमा टोखाले नयाँ स्वाद दिन थालेको छ । पर्यटनमा नयाँ–नयाँ गन्तव्यको खोजी भइरहेको अवस्थामा एकदिनको साइड सिन टोखामा पनि गर्न सकिन्छ ।
भिटोफबाट सबैले पाठ सिकौं
साउन १३, काठमाण्डौ । गाँउ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च(भिटोफ)नेपाल शुद्ध गाँउ पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न, नयाँ–नयाँ नमूना गाँउहरुको खोजी गर्न अर्थात शहर केन्द्रित पर्यटनलाई गाँउ केन्द्रित बनाउने मुख्य उदेश्यका साथ स्थापित संस्था हो ।
गाउ पर्यटनको जय होस् ।
गाउ पर्यटनको विकास गर्ने उद्देश्यले झण्डै २ दशक अघि स्थापना भएको गाउ पर्यटन मञ्च नेपालले ३१ जुलाई २०१६ का दिन काठमाडौंमा साधारण सभा र नया कार्यसमितिको चुनाव गर्दैछ । हालसम्म कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाशक्ति लगायतका दल निकट पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्ना–आफ्ना वार्ता समिति गठन गरेका कुरा लगायत प्रमुख पदहरुमा रहने भन्ने कुरा बजारमा आइरहेका छन् र आउने क्रम जारी छ ।
हत्या गर्दा पनि साइत जुराउने राणाहरु
ज्योतिष विद्यामा दीक्षित परिवारको विशेष लगाव थियो । राणा शासकका खोपी, निजी ज्योतिषी र कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेर बस्ने दीक्षित परिवारका सदस्य थिए । रोलक्रमका राणा परिवारमा दीक्षित परिवारले आ–आफ्नो भाग लगाएका थिए । त्यसमध्ये मेरा हजुरबुबा चन्द्रशमशेरको दरबारमा थिए भने साहिँला काका हजुरबुबा सदाशिव आचार्य दीक्षित भीमशमशेरकोमा । त्यसै गरी अन्य काका हजुरबुबाहरू वीरशमशेरका रोलक्रमका १७ भाइ छोराको दरबारमा थिए ।
बुद्ध र कुटनीतिक आयाम
केहि समय अगाडि मात्र ‘लुम्बिनीः नेपाल भगवान् बुद्धको जन्मस्थान र बौद्ध दर्शनको उद्गम भूमि’ को मुख्य ‘थिम’ को अन्तर्रा्ष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । भारत यसको ‘टाइटल’ लाई लिएर पक्कै पनि खुसी नहुनुपर्छ । किनभने विगतमा उसकै ‘सुझाव’ को आधारमा नेपालले आयोजना गर्ने सम्मेलनको शीर्षक तय हुन्थ्यो ताकि सकेसम्म शीर्षकले बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी हो भन्ने तथ्यलाई ठोस रूपमा उजागर नगरी गौर्ण बनाइदियोस, तर यसपटक त्यसो भएन ।
नेपाल भारत सम्बन्ध कता जादैँ छ ?
जेठ ११, काठमाडौं । २७ वैशाखबाट हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच दिने भारत भ्रमण कार्यक्रमलाई २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन नगर्नु धेरैका लागि अप्रत्यासित घटना थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ वैशाखको व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यसको छनक दिइसकेका थिए । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, “यो सरकार कतै डिजाइन भएर हैन, यही संसद्बाट बनेको हो र सरकारको आयु पनि संसद्मै निर्भर छ ।”
विश्व यौन वजारमा नेपाली चेली
जेष्ठ९, काठमाडौं । सेक्स अर्थात् यौन मानव सभ्यताको उत्थान भएयता चासोको विषय मात्र भएको छैन, अर्थशास्त्रसँग जोडिएको व्यापारका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । पौराणिक कालमा रचिएका आख्यानहरूमा वर्णन गरिएका यौन दासीको परिभाषा अहिलेसम्म पनि परिवर्तन भएको छैन । आधुनिककालमा आएर यसले बृहत् बजारको रूप लिएको छ । स्त्रीको यौनलाई पुरुषप्रधान समाजले
प्राचीन कपिलवस्तुः सक्कलीको नक्कली तर्क
भारतले श्रावस्ती जिल्लास्थित पिप्रहवामा बौद्ध स्थलमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ निमार्ण गरेको चर्चा चारैतिर छ । अहिले पनि ‘नक्कली लुम्बिनी’ भन्दै पिप्रहवाको तस्वीर देखाइन्छ। ‘नक्कली लुम्बिनी’ वा ‘नक्कली कपिलवस्तु’ हेर्न जाने र भारतविरुद्ध द्वेषभाव राख्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ। वास्तवमा पिप्रहवाको अध्ययन–अनुसन्धान वा निर्माण लुम्बिनीको नाममा भइरहेको छैन। यसलाई भारतले प्राचीन राज्य ‘कपिलवस्तु’ मान्दै आएको छ र नेपालका
फेसबुक डिजिटल भूतहरुको संग्रह बन्ने खतरा
जेठ ४, काठमाडौं । मेरी काकीको निधन भएको दिन मैले विलियम सेक्सपियरका रचनाहरूको संकलनको पहिलो पृष्ठमा उहाँले मेरा लागि लेखेको प्रेमपूर्ण वाक्य फेला पारेँ– ’लिपिबद्ध शब्द तिम्रा लागि कति महत्वका हुन्छन् भन्ने मलाई थाहा छ । तिम्रा लागि भनेर मैले जोहो गरिदिएको उपहार यही हो। उही तिम्री काकी ज्याकी।’मेरा निम्ति उनले छोडेको अन्तिम सन्देश पढेपछि भावुक हुँदै मैले ल्यापटप खोलेँ र उनको फेसबुक पेज हेरेँ। फेसबुक पेजमा उनका तस्बिर र ठट्यौला पोस्ट देखेर थोरै भए पनि राहत महसुस भयो। फेसबुक फिडको माथिपट्टि मेरो एकजना भाइ पर्नेले पोस्ट गरेको जलक्रीडा गरिरहेका दुइटा हात्तीको भिडियो थियो। मेरी काकीलाई हात्ती खूब मन पर्थ्यो। त्यसको तल उनका विद्यार्थीले व्यक्त गरेका समवेदनाका शब्द र उनकी बुहारीले उनका नाममा लेखेको समवेदना सन्देश थियो। माउस माथितिर स्क्रोल गरेर हेर्दा फेसबुक पेजमा यस्तो आशयको सन्देश थियो– ज्याकीले फ्रोस्टबर्ग स्टेट युनिभर्सि्टिमा पढेकी हुन्, उनले बाल्टिमोर स्कुलको अंग्रेजी विभाग प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव बटुलिसकेकी छिन् र उनी अहिले बाल्टिमोरमा बस्छिन्।’ के उनी अझै पनि बाल्टिमोरमै बस्छिन् त? यो हरफ पढेपछि म टक्क रोकिएँ। होइन। उनी कतै पनि बस्दिनन्। उनले यो धर्ती सदाका निम्ति छोडिसकिन्, तर पनि फेसबुकमा उनी जीवितै छिन्। काकी ज्याकीले जीवन त्यागेको क्षण मैले सम्भ्किएँ। उनको शरीरका ठाउँठाउँमा तार जोडिएका थिए। ती तार मेसिनमा जडान गरिएका थिए। वरिपरि हामी उभिएका थियौँ। त्यत्तिकैमा उनी बितिन्। मानिसको अन्तिम क्षणको साक्षी बन्दाको अनुभूति अचम्मको हुँदो रहेछ। केही क्षणअघि आफूसँग बोलिरहेको, मुठी कसिरहेको, आफूलाई भेट्न आएकोमा आभार व्यक्त गरिरहेको व्यक्ति क्षणभरमै नरहेको देख्नु अचम्मको कुरा रहेछ। हेर्दाहेर्दै छेउको मेसिनको स्त्र्किनका बांगाटिंगा रेखा सीधा रेखामा परिणत भए। मेसिनले उनको मृत्यु भएको प्रमाणित गरिदियो, तर अर्को मेसिनले उनलाई अझै पनि बचाइरहेको छ। त्यो मेसिन हो– फेसबुक।
नेपालमा फुड पर्यटनको अथाह सम्भावना छ ।
गिरीराज सेढाईं । वैशाख २३,काठमाडौं । जर्मनी र अमेरिकाका विभिन्न ठाँउका होटलहरुमा सेफका रुपमा काम गरें । त्यसअघि नेपालमा नै काम गर्थें । विदेशबाट फर्केको झण्डै पाँच वर्ष भयो । विदेश १५ वर्ष जति बसें । एउटै क्षेत्रमा लामो समय काम गरेपनि रमाइलो नै थियो । लामो समय विदेशमा बसेपछि आफ्नो पहिचान नहुने रहेछ । त्यै भएर नेपाल फर्केको हुँ । नेपाल नबनेसम्म नेपाली जातीको पहिचान बन्दैन । विदेशमा सम्भावना धेरै थिए । तिनलाई त्यागेर नेपाल फर्किएँ । नेपालमा जातीय विविधता छ । खानामा पनि विविधता छ । ती खानालाई बजारिकरण गर्न सकिएको छैन । नेपाल खानाका लागि पनि गन्तव्य हो भनेर चिनाउन सकिन्छ
किन गरिन्छ विमान अपहरण ?
चैत्र २१,काठमाडौं । अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा उडानसेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेको धेरै समय बित्न नपाउँदै विमान अपहरणका घटनाहरु हुन थालेक थिए । तर, त्यतिबेला विमान अपहरणकारीहरूले राजनीतिकभन्दा पनि व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि हाइज्याक गर्ने गर्थे । कहिलेकाहीँ आपराधिक मनोवृत्तिको वशमा परेर हाइज्याक गर्ने पनि भेटिन्थे । राजनीतिक ध्येयबाट प्रेरित भएर हाइज्याक हुने गरेको भने हम्मेसि भेटिँदैनथ्यो ।
नेपालमा भूकम्पको असर र तथ्य
चैत्र १३, काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष हुनै लाग्दा भूकम्प र भूकम्पको असरबारे धेरै तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपालको जमिन, प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरणबारे अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, चीन, जर्मनीलगायत देशका प्रख्यात विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानकर्ताले नेपालबारे आश्चर्यजनक तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । बाढीपहिरो, सुक्खा, वायु प्रदूषण तथा हिमालमा हिउँ पातलिनुका कारण खोज्न धेरै विदेशी वैज्ञानिक नेपाल आए । अधिकांश अध्ययनले नेपालको हिमालका हिउँ घट्दै गएको, प्रदूषणले वायुमण्डल अस्वाभाविक रूपमा ढाक्न थालेको तथा पानीका स्रोत सुक्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै बेलैमा सचेत नभए भयावह भविष्यको चेतावनी दिएका छन् । यसबीचमा नेपालसँग जोडर भएका ठूला अन्तर्रा्ष्ट्रिय अध्ययनका निष्कर्षले विश्वभरको ध्यान तानेको छ । यसरी नै हिमालको हिउँ पग्लिने र तापक्रम बढ्ने हो भने सन् २०५० देखि नै एसियाको वाटर टावर मानिने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र र तराईमा पानीको हाहाकार मच्चिने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । तर वैज्ञानिकहरूले सार्वजनिक गरेका यस्ता निष्कर्ष चेतावनीले सरकारलाई छोएको छैन । ‘
कसरि गरिन्छ कृत्रिम गर्भधान ?
चैत्र ५, काठमाडौं । वकसित देशहरूमै पनि कृत्रिम गर्भाधान प्रविधिको सफलता दर ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भएकोले हाम्रो जस्तो मुलुकका धेरैजसो निःसन्तान दम्पतीले सम्भावित असफलताबाट हच्केर यसको प्रयोग नगरेको बुझिन्छ।
TIMS को उद्देश्य आर्थिक पक्ष तथा कार्यविधि
Trekking information management system (TIMS) लाई ‘टिम्स’ कार्ड भनिन्छ । हरियो रंगको टिम्स गाईड वा पोर्टर (Group) प्रयोग गर्ने पर्यटकहरुका लागि यो कार्ड प्रयोग गरिन्छ भने निलो रंगको टिम्स आफै ट्रेकिङ जाने (FIT) अथवा गाईड वा पोर्टर विना ट्रेकिङ जाने पर्यटकहरुले प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समृद्ध मुलुकको लागि बलियो कांग्रेस
केशवराज चौलागाई , अहिले नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन चलिरहेको छ । शब्द र अफवाहको पछाडी प्रतिनिधी साथीहरु अलमलीएका छन् । बलियो कांग्रेस निर्माण भएमात्र गाँउ गाँउमा कांग्रेसले शिर ठाडो पार्न सक्छ । अव कुरा नेतृत्वको सवालमा गरौ, रामचन्द्र पौडेल, शंशाक कोइराला पारिवारिक व्यक्तित्वको विरासतमा खडा हुनु भएको छ । वहाँहरुलाइ पिडित भनेर प्रचार गरिएको पनि सुनीयो वहाँहरुले कांङग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बाहेक के चिज पाउनु भएन ? सधै पार्टीमा वहाँहरुको हालिमुहाली रहेकै हो
सबै‌ नदीका आ–आफ्नै‌ विशे‌षता छन् । त्यसबे‌ला सबै‌ नदीहरु पुण्यमती भएर‌ नै‌ नदी किनार‌ामा घाट र‌ शिवालय दे‌खापर‌े‌का हुन् । पौ‌र‌ाणिक महिमा भएर‌ पनि के‌ही व्यक्तिहरुको‌ स्वार्थका कार‌ण कुनै‌ पनि नदी स्वच्छ र‌हन सके‌न । एउटै‌ बाग्मतीमा अने‌क तीर्थ दे‌खापर्नुमा अने‌क कार‌ण हो‌लान् ।
इतिहासमा धन्न हाम्रा पुर्खाका पाखुर‌ाले‌ बलिदान दिएको‌ थियो‌ र‌ आज हामी सार्वभौ‌म दे‌शका नागरि‌क भनी गौ‌र‌व गर्नसक्दछौ‌ं, प्रकृतिमा धन्न हाम्रै‌ भूगो‌लमा उच्च शिखर‌ ठडियो‌ र‌ हामी संसार‌माझ विश्वकै‌ अग्लो‌ शिर‌ भएको‌ दे‌शका नागरि‌क भनी गौ‌र‌व गर्नसक्दछौ‌ं, धन्न सीमांकनमा लुम्बिनी ने‌पालमै‌ पर‌े‌काले‌ गौ‌तम बुद्धको‌ नाममा हामी गौ‌र‌व गर्दछौ‌ं ।
मुटुमै फोक्सुण्डो !
दे‌श ! यस्तो‌ पनि हुन्छ ? कम्तिमा आफूलाई त चिन्न सक्नुपर्छ नि ! गरि‌बले‌ चो‌र‌े‌र‌ ल्याएको‌ गहना भकार‌ो‌मा लुकाए झै‌ लुकाएर‌ र‌ाखे‌छ ! के‌ हो‌ यो‌ ? यस्तो‌ सौ‌न्दर्यलाई पनि र‌ाजनीतिको‌ पे‌टिको‌टले‌ छो‌पे‌र‌ आखिर‌ यतिञ्जे‌लसम्म लुकाई र‌ाखिस् है‌न ?
जित्दा राजनीतिक पार्टीले जित्ने हार्दा नाट्टा हार्ने अवस्था बन्यो
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) विसुद्व एउटा व्यवसायीक संस्था हो । यो व्यवसायीक हिसावमा अघि बढ्नुपर्छ ।
पूरा होलान सीईओ जोशीका महत्वकांक्षी योजना ?
सुवास भट्ट/पौष ८। नेतृत्वबिहीनताको लामो संक्रमण झेलेको नेपाल पर्यटन बोर्डले भर्खरै नयाँ सीईओ पाएको छ । ठूलो रस्साकस्सीकाबीच चार वर्षपछि गत बिहीबार बोर्डले दीपकराज जोशीलाई सीईओमा छनोट गर्‍यो । सीईओ पाएलगत्तै बोर्डले अब नयाँ दिशा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
के अब नेताले पनि पारदर्शि हुनुपर्ने समय आएको हो ?
नेता, प्रशासक, पूर्वमन्त्री, व्यापारीलगातका २९ विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा पत्र नै काटेर अख्तियारले छानविन थालेपछि यो विषयले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । खेलकूदपछि यसपटक अख्तियारको आँखामा राजनीतिक अनुहार परेको हो ।
भारतीय हस्तक्षेपको निम्ता त हामी स्वयंले पनि दिएका छौँ । खासगरी राज्य र राजनीतिक तह यसमा बढी जिम्मेवार छ । सत्ता स्वार्थका लागि भारतीय आर्शिवाद लिन किञ्चित पछि नहट्ने राजनीतिक नेतृत्व र राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साटो भएका स्रोत÷साधन सुम्पन तयार रहने राज्य र राज्यसम्यन्त्र यसको मूल कारण हो ।
चाडपर्व पर्यटनका निम्ति तिहार
नेपाल संसारकै एउटा विविधताले भरिपूर्ण देश हो, जहाँ प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं भाषिक रुपमा अनेकता रहेको छ । विभिन्न क्षेत्र एवं जातजातिहरुको आ–आफ्नै मौलिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वहरु छन् ।
के हो दसैं, किन मनाइन्छ र चाडपर्व पर्यटनको सम्भावना
टान निर्वाचन –२०७२ : भ्रष्टाचार र अनिमियता रोज्ने कि सदाचार र उन्नती
निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यो प्रकृयामा फरक –फरक विचार र प्रवृतीबिच टकराव हुने भएकाले जित र हार अवश्य हुन्छ । अहिले साहसिक तथा पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संगठन टानमा केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका लागि निर्वाचनु हुन गईरहेको छ ।
Our reality amidst propoganda
It is My Honour to write on behalf of Tourist Guide Association of Nepal (TURGAN) for the tourism entrepreneurs and others expert on the related field.
नाकावन्दीको बेलामा मरिचमानलाई भेट्दा
पञ्चायतले आफ्नो शासन व्यवस्था लम्ब्याउन अन्तिम लडाइँ लड्दै थियो । ऊ निकै संकटबाट गुज्रिरहेको थियो, जनता आन्दोलित थिए ।
टान निर्वाचन– २०१५ र एमाओवादीको भूमिका
सबैलाई अवगत छ, यहि असोज १५ गते शुक्रबार ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)मा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुन गईरहेको छ ।
सात दसकदेखिको नेपाली सपना साकार
आईतबार नेपालको नयाँ संविधान ‘नेपालको संविधान –२०७२’ जारी भएको छ । ‘जनताको जनताद्वारा जनताका लागि’ भन्ने लोकतन्त्रको बास्तविक परिभाषा नेपाल मुलुकमा प्रथमचोटी चरितार्थ भएको छ । नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक आफ्नो संविधान आफै बनाएका छन् । दशकौँदेखिको गणतन्त्रको सपना साकार भएको छ ।
दर्शनीय एवं बन्दनीय तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड
धार्मिक दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्दा नेपालको समग्र पर्वतीय क्षेत्र तपस्य, ध्यान र आराधना गर्ने पुण्यस्थल रहेछ भन्ने कुरा आदिम कालदेखि यहाँ रहि आएका आध्यात्मिक स्थलहरुको उपस्थितिले पुष्टि गर्छ । मुस्ताङमा अवस्थित मुक्तिनाथ, गोरखा जिल्लाको मनकामना, चितवनको देवघाट र रसुवाको गोसाइँकुण्ड इत्यादि विशिष्ट रुपमा पुजनीय छन् । यी धार्मिक स्थलहरुले अधिकांश हिन्दुहरुको मन–मष्तिक र भावनाउपर श्रद्धाभक्तिमा अमिट छाप छोडेका छन् र मानव कल्याण तथा परोपकारी कार्य गर्न मार्गदर्शन गरिरहेका छन् ।
टानको निर्वाचन अभिलम्ब घोषणा गर
सन् २०१३ को सेप्टेम्बर महिनामा टानको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो । दुईवर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित यो कार्यसमितिको अवधि समाप्त हुन अब २ महिना भन्दा थोरै मात्र समय बाँकी छ ।